Linux Journal Readers 'Choice Awards 2011 | Site na Linux
Banyere. Bọchị ndị a anyị na-eweta nsogbu na njikọ ahụ, ọ bụ ya mere enwere obere ọrụ na blog. Anyị na-emekwa mgbanwe ụfọdụ, mana agbanyeghị, ka anyị gakwuru ndị metụtara anyị. M ahapụrụ gị nsonaazụ nke nyocha ha mere ndị na-agụ Akwụkwọ Linux.
Kasị mma nkesa: Ubuntu , Onye na-esote Debian.
Netbook kacha mma / Akụrụngwa akụrụngwa oke: Ubuntu Netbok Remix, Onye na-esote android jikọtara ya na Debian.
Sistemụ arụmọrụ kacha mma: android site na 80% nke votu, Onye na-agba ọsọ Meego.
Ọnọdụ desktọọpụ kacha mma: GNOME, onye na-esote KDE, enwere naanị 3% dị iche, na ebe nke atọ bụ XFCE.
Ihe nchọgharị weebụ kacha mma: Firefox, onye na-esote Chrome / Chromium.
Onye ahia email kacha mma: Thunderbird, onye na-esote: Onye Ahịa Weebụ Gmail.
Kasị mma ozi ngwa ngwa (IM) ahịa: Akwukwo, Onye na-esote Skype.
Onye ahịa IRC kacha mma: Akwukwo, Onye na-esote X-Nkata.
Kasị mma microblogging ahịa: Gwibber, Onye na-esote Choqok.
Lọ ọrụ kachasị mma: FreeOffice, Onye na-esote Mepee Office.
Mmemme Office Nke Dị Mma: OpenOffice Writer, Onye na-esote Abiword.
Kachasị mma njikwa njikwa foto: digiKam, Onye na-esote Picasa.
Ngwá ọrụ edezi kacha mma: Gimp, Onye na-esote InkscapeEchere m na ha kwesịrị ịmepụta edemede dị iche iche, otu maka edezi eserese eserese na otu maka edezi foto, ebe etinyere ngwa abụọ a maka ebumnuche dị iche.
Ngwaọrụ Na - edezi Ihe kacha mma: Ọdịdị, Onye na-esote Ardor.
Ihe egwu kacha mma: Ọfọn, Onye na-esote VLC, 7% ọdịiche dị n'etiti abụọ. Nke atọ bụ Rhythmbox nke daara ọtụtụ site n'otu afọ gaa na nke ọzọ.
Onye egwu egwuregwu kacha mma: VLC, Onye na-esote MPlayer, merie VLC site na ọtụtụ.
Ngwá ọrụ ọrụ ntanetị kacha mma: Google Docs, Onye mmeri ya, bụ Wikis.
Ngwa kacha mma maka ụmụaka: Agba Tux, Onye na-esote GCompris.
Egwuregwu kacha mma: Ofwa nke goo, Onye na-esote Agha Maka Wesnoth. Na oge mbụ ọ merie Ntụ oyi.
Ngwaọrụ nlekota kacha mma: Nagios, Onye na-esote Mepee.
Sistemụ njikwa ọdụ data kacha mma: MySQL, Onye na-esote PostgreSQL. MySQL nwere votu ugboro abụọ nke PostgreSQL.
Ihe ngwọta kacha mma iji mee nkwado ndabere: rsync, Onye na-esote ụ.
Ihe ngwọta kachasị mma: Virtualbox, Onye mmeri nke Sun VMware.
Usoro nchịkwa ka mma: Git, Onye na-esote Mgbagha.
Asụsụ mmemme kacha mma: Python, Onye na-esote C +, ihe dị iche bụ 6%.
Asụsụ ederede kachasị mma: Python, Onye na-esote Bash.
IDE kacha mma: eklips, Onye na-esote wd.
CMS kacha mma: WordPress, Onye na-esote Drupal.
Best Linux Laptọọpụ Onye kere: Dell, Onye na-esote ASUS.
Best Linux Desktop Onye kere: Dell, enweghị onye na-ama ya aka.
Ngwaọrụ Linux kacha mma: IBM, Onye na-esote Dell.
Akwụkwọ Linux kacha mma: "Linux in a Nutshell" nke Ellen Siever dere. Ndị na-agba ọsọ: "Naanị maka ntụrụndụ: Akụkọ nke Mgbanwe Ọdachi" nke Linus Torvalds na David Diamond.
Best Linux Smartphone Maker: HTC, Onye na-esote Samsung
Best Linux Tablet Maker: Samsung na ahịrị Galaxy, ASUS na-agba ọsọ-ya na ASUS Transformers.
Ihe omuma kacha mepere emepe (emere n'etiti 2010-2011): FreeOffice.
Ngwaahịa nke afọ: GNOME 3.
E si na ụmụ mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Linux Journal Readers 'Choice Awards 2011
Daalụ maka ichetara m Krismas ¬¬
Kasị mma nkesa: Ubuntu
Netbook kacha mma / akụrụngwa akụrụngwa oke: Ubuntu Netbok Remix
Ngwá Ọrụ Na - edezi Ihe kacha mma: Audacity
Ngwaahịa nke Afọ: GNOME 3
Nke a bụ iwe na iwere dobe
Cheta na nsonaazụ ndị a sitere na nyocha nke ndị ọrụ Linux Journal. Ọ dịghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na eziokwu.
Mgbe ahụ Linux Journal ọrụ bụ ndị na-amaghị
Echere m na ọ bụghị okwu nke amaghị ihe, anyị agaghị echefu na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ Linux na-amalite site na Ubuntu, ọ bụ nkesa mgbasa ozi kachasị dị ka nke kachasị mfe iji wụnye ma jiri, ọtụtụ iri puku nchịkọta, yana PPAs ahụ pụta nke ọ bụla ọhụrụ ngwa, ihe niile na-arụnyere na a abụọ click, ọ bụghị ndị niile na ndị ọrụ na-achọ ịmata ma ọ bụ adventurous onye na-eme mkpebi ịgbanwe OS, ọtụtụ na-enwe afọ ojuju na Ya mere ndị conformists, ndị ọzọ na-eme mgbanwe na-ekpebi ịlaghachi n'ihi na ha na-amasị Ubuntu, (Onweghi ihe edere banyere uto), ị ghaghi iburu n'uche na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile, ọ bụrụ na ọ bụghị anyị niile sitere na aha a na-akpọghị aha na ejiri m n'aka na Mbugharị na-efu anyị ọtụtụ ihe. Cheedị, nwa oge, ihe ọ ga-adị n’ụwa a ma ọ bụrụ na anyị niile nwere otu ụdị ihe ndị na-amasị anyị.
Nke a bụ echiche m dị umeala n'obi.
Amalitere m site nauseuse wee jiri yast kwadoo, kwagara na mint wee si ebe ahụ biri ọtụtụ ụbọchị obi ụtọ ... ee, ama m, "ọtụtụ n'ime ha" mana ị nwere ike ịnwale sistemụ ọzọ, kedu mmetụta bụ ahịa nke ụdị ubuntu . Kedu ihe ụwa ga-abụ otu ihe ụtọ ahụ ... nke ọma, ọ gaghị enwe ihe ọ bụla 😀 ọ ga-agwụ ike.
Kedu ihe ụwa ga-abụ otu ihe ahụ
Ọ dị mma, mmadụ, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ezigbo uto, distros ejiri mee ga-abụ nke dị mma, sistemụ kwa, agaghị enwe reggaeton, Justin Bieber agaghị eri ọdụ, ọgbọ niile nke ndị nne ga-adị mma, wdg.
Best Gwibber microblogging ahịa !! ma ọ bụrụ na ọbụna oru ngo na mmepe dị ka Hotot ma ọ bụ Polly dị otu narị okpukpu ka mma. Achọpụtara na ndị zaghachiri na nyocha ahụ bụ ndị ọrụ Ubuntu, mana Gwibber. Oge m jiri Ubuntu ihe mbu m mere bu iwepu ya.
Asụsụ mmemme kachasị mma: Eke Ọgba, Onye na-agba ọsọ C ++, ihe dị iche bụ 6%. (Enweghị asịsa)
Best Ubuntu Distro?
Chei, mana hey.
Ana m ahọrọ Arch na OpenSuse.
A na m achọ Blender.
Na Dell OMG. Kedu mgbe Toshiba ga-adonyere anyi ??? Mgbe ole?
Na mberede ọ bụ n'ihi na a napụrụ ụzọ mbụ na aha ọjọọ na njedebe nke afọ, na mberede n'afọ ọzọ ma ọ bụrụ na ọ bụ nke mbụ
Ha bụ naanị nsonaazụ nyocha, ọ dịka isiokwu banyere sava ebe edebere debian na mbụ, mana ọ na-ahụ nke ọma na eserese na ọ dị n'okpuru centos.
Kaadị ID nke nkesa GNU / Linux